Qorista iyo tababarka hibada - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Qorista iyo Tababarida Xirfadaha
Fadlan u dir resumeygaaga: Adeeg @ runbo.net Muujinaya booska:
Adeegga Macaamiisha ee Internetka:
1. Diirad saarida khadka tooska ah ee isgaarsiinta si loo fududeeyo heshiis amar
2. Adeegsiga habab badan oo adeeg si toos ah loogu adeegto dadka isticmaala loona xaliyo dhibaatada isticmaaleyaasha isticmaalaya alaabada.
3. Uruurinta baahiyaha isticmaalaha, ka caawinta waax kasta sidii loo horumarin lahaa howlaha wax soo saarka iyo in la dhameeyo kor u qaadista suuqa.
4. Maaraynta cabashooyinka macaamiisha iyo Kordhinta macmiilka macmiilka ah.
5. Falanqaynta xogta isticmaaleyaasha iyo tayaynta xalka shaqada.
6. Ogolaanshaha nidaamka wareejinta shaqada.
1. Xawliga makiinada waa inay ka badnaataa 80 eray / min (dhageysi iyo makiinad qorid)
2. In aad jeceshahay internetka oo aad leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan adeegsiga shabakadda.
3. Shahaado kuliyadeed ama wixii ka sareeya, kombuyuutar, ganacsi, iwm.
4. Inaad jeceshahay inaad dadka laxiriirto oo aad xambaarsato cadaadiska wada hadalka
5. Khibrada shaqo ee la xidhiidha iibka Macaamiisha ayaa la door bidaa.
Shuruudaha Tayada Qofka:
1. Awood aad u fiican oo wax ka qabashada arrimaha iyo barashada aqoonta cusub;
2. Ku fiicnow dhageysiga, fahamka iyo helitaanka miyirka adeeg;
3. Feejignaanta faahfaahinta, yeelashada karti adag oo ah barashada shaqsiga iyo is-edbinta.
4. Lahaanshaha niyad wanaag kooxeed, la qabsashada jawiga shaqada si dhakhso leh;
5. Jeclaanshaha warshadaha adeegga iyo garashada qiimaha adeeggu leeyahay.
1. Wuxuu mas'uul ka yahay qorida dhammaan noocyada maqaallada, faallooyinka, agabyada dacaayadaha iyo soo koobista websaydhka
2. Mas'uul ka ah aruurinta agabyada websaydhka, qorista qoraal gacmeedka iyo
Akhrinta qoraalka dambe, xaqiijinta iyo shaqo kale:
3. Ka qayb qaadashada horumarinta, hirgelinta iyo kormeerka istaraatiijiyadaha iyo qorshooyinka dhiirrigelinta degellada.
1. Waxa ugu weyn saxaafadda, isgaadhsiinta, Shiinaha, dhaqaalaha iyo maaraynta, iyo sooyaalka waxbarashadu waa inuu noqdaa shahaadada koowaad ama ka sare.
2. Mas'uul ka noqo aruurinta agabyada websaydhka, qorista gacmaha iyo akhrinta qoraalka dambe, xaqiijinta, iwm;
3. Aqoon u leh hababka mihnadeed, fikirka degdegga ah, aragtida adag, xirfadaha qoraalka adag, awoodda muujinta luqadda ee xoogga leh.
4. Awood u yeelan kartaa inaad qorto nuqul dallacaad si madax-bannaan,
oo leh khibrad shaqo ee bogga iyo majaladda.
Raac jihada horumarinta istiraatiijiyadeed ee shirkadda AKF, U hoggaansanaanta baahiyaha horumarinta ganacsiga, Falanqaynta farqiga u dhexeeya kartida booska oo ay weheliso kanaallo kala duwan oo lagu horumarinayo shaqaalaha, dhisidda nidaam tababar oo shaqaale si dhakhso leh loogu taageero horumarinta ganacsiga, iyo ka caawinta horumarinta xirfadaha shaqaalaha iyada oo loo marayo kala duwanaansho iyo tababar mufti-cabbir ah.
Dejinta tallaabooyinka maamulka ee waxbarashada shaqaalaha iyo tababarka, iyo fulinta nidaamsan, jaango'an iyo maareyn cilmiyaysan ee waxbarashada shaqaalaha iyo tababarka. Si adag u hirgeli ka noqoshada iyo adeegsiga lacagaha tababarka sida waafaqsan xeerarka. Dhaqaalaha iyo ilaha tababarka waa kuwo si wax ku ool ah oo dhameystiran looga faa'iideystay. Waxbarashada iyo tababbarka shaqaalaha waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin habdhaqan maalgashi ee shirkadda, shirkaddana waxaa lagu beeray urur waxbarasho.
Ballaarinta kanaalka tababarka hibada si loo daboolo baahiyaha barashada joogtada ah ee hibada xirfadeed iyo farsamo, iyo bixinta taageero aqooneed oo loogu talagalay horumarinta awooda shaqaalaha ee xaqiijinta yoolalka horumarinta astaanta AKF.
Nidaam iyo dhameystiran, oo culeys saaraya qodobbada muhiimka ah:
Isagoo xoogga saaraya beerashada hibada heerka sare iyo hibooyinka hal abuurka leh. Xerada tababarka waxaa loo qaatay in lagu beero oo la dhiso maskax tayo sare leh oo gudaha ah.
Xiritaanka ganacsiga, U fiirsashada waxtarka dhabta ah, Tababarka shaqaalaha ee ku dhow istaraatiijiyadda shirkadda, Xoojinta taageerada tababarka ee ganacsiga shirkadda, Isku darista aragtida iyo ku dhaqanka, Diiradda saaraya dalabka iyo saameynta dhabta ah.
Dhismaha awooda hibada leh: Tababarida Shaqaalaha oo dhameystiran
Tabobar xirfadeed Tababar: Hay'ad tayo leh oo habeysan oo maarayn aasaasi ah
Hay'ad tayo leh oo habeysan oo maamul dhexe ah
Keyd hayaha barkadda ee Maamulka Sare
Wadada horumarinta xirfadaha farsamada ：
Khubarada Sare ：
Kaadiriin xirfadlayaal ah:
Dariiqa Horumarinta Shaqada:
Iibiye Sare Ganacsade Dhex-dhexaad ah Junior iibiye shaqaale caadi ah
Dariiqa horumarinta shaqada: Maareeye kuxigeenka kuxigeenka xarunta / Madaxa Kormeeraha Gobolka / Kormeeraha Maareeyaha Gobolka Kaydiyaha Kormeeraha 60 bilood 36 bilood 24 bilood 12 bilood 0-6 bilood